ဟူ၍ စပ်ဖြီးဖြီး အမူအယာဖြင့် ပြောလိုက်လေတော့၏။ ယင်း လူရွယ်မှာ အောင်မောင်ဦး ဖြစ်ကြောင်းကိုမူ စာဖတ်သူတို့ သိပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ မောင်အောင်ဦးမှ ၎င်း၏ အဘဖြစ်သူနှင့် သွားရောက်အိပ်စက်သည့် နေ့က ကြားခဲ့ရသော တောင်ပေါ်မှ တယောသံ အကြောင်းကို ပြန်လည် ပြောပြနေခြင်း ဖြစ်ပါ၏။
This entry was posted in ကိုယ်တိုင်ရေး စာနှင့် ကဗျာများ and tagged ဝတ္ထုတို, တောင်ပေါ်က တယောသံ. Bookmark the permalink.
← Facebook Chat ကို Invisible လုပ်ထားနည်း
Desktop Wallpapers ဝက်ဘ်ဆိုက်များ →